Nea Ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm Mu | NWT
Asɛm a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn nnɛ no, ɛno na ɛwɔ Bible mu no. Ɛkyerɛ yɛn sɛnea yɛbɛbɔ yɛn bra ama asi yɛn yiye, na ɛma yehu nea yɛyɛ a Onyankopɔn ani begye yɛn ho. Afei nso, ɛma yenya nsɛmmisa a edidi so yi ho mmuae:
1 Hena ne Onyankopɔn?
2 Wobɛyɛ dɛn asua Onyankopɔn ho ade?
3 Hena na ɔkyerɛw Bible no?
4 Nea Bible ka fa abɔde mu nyansahu ho no yɛ nokware anaa?
5 Asɛm bɛn paa na ɛwɔ Bible mu?
6 Nkɔm bɛn na Bible hyɛ faa Mesia no ho?
7 Dɛn na Bible kae sɛ ebesisi wɔ yɛn bere yi so?
8 Nnipa amanehunu fi Onyankopɔn anaa?
9 Adɛn nti na nnipa hu amane?
10 Dɛn na Bible aka afa daakye ho?
11 Sɛ obi wu a, dɛn na ɛto no?
12 Anidaso wɔ hɔ sɛ yebehu awufo bio?
13 Dɛn na Bible ka wɔ adwuma ho?
14 Wobɛyɛ dɛn ahwɛ nea wowɔ so yiye?
15 Dɛn na woyɛ a ɛbɛma w’ani agye?
16 Wobɛyɛ dɛn na adwinnwen anhyɛ wo so?
17 Ɔkwan bɛn so na Bible betumi aboa w’abusua?
18 Dɛn na woyɛ a ɛbɛma woabɛn Onyankopɔn?
19 Bible mu nhoma ahorow no, dɛn na ɛwɔ mu?
20 Worekenkan Bible a, wobɛyɛ dɛn anya so mfaso paa?
SƐ WOREPƐ BIBLE NKYEKYƐM BI A, WOBƐYƐ DƐN AHU?
Nhoma nketewa 66 na ɛka bom yɛ Bible no. Wɔakyɛ mu ayɛ no afã abien: Hebri ne Aram Kyerɛwnsɛm (“Apam Dedaw”) ne Greek Kyerɛwnsɛm (“Apam Foforo”). Bible mu nhoma biara, wɔakyekyɛm ayɛ no ti ahorow ne nkyekyɛm ahorow. Sɛ wɔkyerɛw kyerɛwsɛm bi a, nɔma a edi nhoma no din akyi no yɛ nhoma no ti, na nɔma a edi hɔ no yɛ nkyekyɛm. Ɛho nhwɛso ni. Genesis 1:1 kyerɛ Genesis ti 1, nkyekyɛm 1.
Share Share Nea Ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm Mu
nwt kr. 5